Imidiya yokuncokola kunye neShishini | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 4, 2011 NgoLwesibini, Agasti 2, 2011 Douglas Karr
Abantu Fumana ukoneliseka Ndikhuphe i-infographic entsha kwi Imidiya yokuncokola kunye neShishini, ebizwa Makhe siye ezantsi kwiShishini loLuntu. Ukusuka kwi-infographic:
Ngo-2014, intengiso yezixhobo zeshishini kwezentlalo, isoftware kunye neenkonzo ziqikelelwa ukuba ziya kufikelela kwi-4.6 yezigidigidi zeedola kwihlabathi liphela. Esi sizukulwana sitsha setekhnoloji siyenyuka ukuze sihlangabezane nemfuno ekhulayo yokunxibelelana kunye nokuguqula yonke imiba yeshishini. Phakathi kwesiphithiphithi, iimarike ezintsha kunye neenkokheli ziya kuvela. Iintatheli ziya kubamkela, kwaye i-PR pros iya kulawula inkqubo. Masingene kwibhaluni yokuthandwa kweshishini lasekuhlaleni.